Isitudiyo seGadi yabucala- kufutshane nedolophu. - I-Airbnb
Isitudiyo seGadi yabucala- kufutshane nedolophu.
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguPaula
Xa iyi-62 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Igumbi elincinci kodwa elitofotofo, elizimeleyo eline-ensuite, elibekwe phakathi kwemithi emihle kunye negadi kwindawo yokuhlala ephezulu. Inomnyango wayo otshixwayo kwaye kukuhamba imizuzu eli-15 kuphela okanye imizuzu emi-5 ukuya kumbindi wedolophu-imizuzu eli-10 yokuqhuba ukuya kwii-wineries kunye neZiko le-Omaka Aviation.
Ikhitshi encinci kubandakanya i-microwave, ipani yombane yokuqhotsa, itoaster, ifriji encinci, i-cutlery, isitya kunye neglasi. Nceda uqaphele: akukho top yokupheka okanye i-oven. Iyunithi ikwaneSmart TV eneNetflix kunye neFreeview.
Indawo entle yegadi ekufutshane nedolophu. Kufuphi nendawo yewayini yeprimiyamu yeNZ, iPicton, iHavelock kunye nezandi ezintle zaseMarlborough.
Ifaneleke ngokufanelekileyo ukuhlala ubusuku obufutshane obu-2, kodwa ukuba ufuna ukuhlala ixesha elide kwaye wonwabe kwindawo encinci, nceda uthumele umyalezo kum njengoko sivumela ukuhlala ixesha elide kwiimeko ezikhethekileyo ngexabiso elincitshisiweyo.
I-wifi ekhawulezayo – i-62 Mbps
4.76 · Izimvo eziyi-324
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi324
Indawo ethe cwaka kakhulu esekwe kwikhilomitha nje enye ukusuka kwiZiko leDolophu, iivenkile, iikhefi, iBala lemidlalo kunye nethiyetha ye-ASB.
Ukuqhuba ngemizuzu eli-10 kukufikisa kwiZiko leLifa leMveli eOmaka nakwiindawo zewayini.
We are a semi retired couple, well travelled and love meeting new people.
Silapha ukuze siqinisekise ukuba ukuhlala kwakho eMarlborough kumnandi kwaye kuyonwabisa kangangoko. Sikhona kuyo nayiphi na imibuzo okanye siya kukushiya kwisixhobo sakho ukuba ufuna ubumfihlo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Blenheim